PE fonosana sary miloko fonosana miloko China Manufacturer
Dongguan Yalan Packing Materials Co., Ltd. [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide mpanondrana:21% - 30% Certs:ISO9001 Description:Peapetaka Peour miloko,Sarimihetsika mitsangatsangana miloko,Sarimihetsika famatorana sarimihetsika miloko
Home > Products > Sarimihetsika mihetsika > Sarimihetsika mihetsika miloko > PE fonosana sary miloko fonosana miloko
Ny fonosana PE fonosana miloko fonosana miloko marefo dia mora sy haingana hanosotra manodidina ny palety, boaty na fanoratana zavatra kely. Izy io dia miantoka azo antoka sy fiarovana mandritra ny fitaterana, azo zahana sy ho tia fihavanana. Ny sarimihetsika fonosana miloko miloko dia mangina, miloko loko, tsara ahafahana mamantatra, mizotra ary manamafy ny fandefasana azy. Ny horonan-tsarimihetsika fanoratana miloko miloko dia manana fanoherana puncture tsara sy fametahana miavaka.
Ny fitaovana fototra ho an'ny famokarana YALAN Polyethylene Colored Stretch Film dia Exxonmobil ary Petrochemical Industries Co., Ltd.Use Exxonmobil LDPE sy LLEPE sns, izay manana fihenan-kevitra mirakitra, fiantraikany ary fihenan'ny "resistace".
Ny fanolorana serivisy OEM sy ODM dia afaka manao lokony samy hafa, ny haben'ny loko fonosana miloko samy hafa loko.
P roduct sary antsipirihany:
Ny sarimihetsika miloko dia mety amin'ny famantarana ny atiny palma ary manome fiarovana fanampiny.
Izahay koa dia manolotra horonantsarimihetsika amin'ny resaka fiarovana izay mainty opaque ary hampijanona ny entanao
fantatra raha vantany vao eo amin'ny lapanao izy, dia tokony ho sarobidy na saro-pady izany. koa
mety amin'ny fanavahana ny vesatra samihafa
● Miaro ny pallet rakotra sy manalavitra maso
● Misy loko maro isan-karazany
● Mamantatra paosy haingana
Peapetaka Peour miloko Sarimihetsika mitsangatsangana miloko Sarimihetsika famatorana sarimihetsika miloko Tape loko miloko Sarimihetsika Pe Stretch miloko Tapezy miforohy miloko Tape mamatotra loko miloko Wrap plastika miloko